ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်စက်၏ဈေးနှုန်းကို ဖြတ်၍ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပီလောပီနံအသည်းကိုဖြတ်သည်
လောင်သောပီလောပီနံအမြစ်များကိုဖြတ်ထုတ်ရန်ဓာတ်ဆီပီလောပီနံ chipper ကိုအဓိကအသုံးပြုသည်,lotus အမြစ်, ကန်စွန်းဥ, ပီလောပီနံ, မုန်လာဥနီ,ငှက်ပျောသီး,ကွမ်းခြံကုန်း, chips အဖြစ်သံပုရာနှင့်အခြားလတ်ဆတ်သောအမြစ် system ကိုကုန်ကြမ်း chips.The အထူ3~ 15mm ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်. ဤဖြတ်စက်သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်း၏အင်္ဂါရပ်များရှိသော rotary cutter head ကိုအသုံးပြုသည်, ပင်အထူနှင့်အရွယ်အစားချပ်, လတ်ဆတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းတစ်သျှူးနှင့်ဖိုင်ဘာတစ်သျှူးကိုမဖျက်ဆီးကြဘူး,ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားသည် ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရရှိနိုင်သည်,၎င်းသည်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့်ဓာတုစက်မှုစက်ရုံများတွင်လူကြိုက်များသည်.
ရိုးရာပီလောပီနံချစ်ပ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်, ပီလောပီနံကိုအခွံခွာခြင်းဖြင့်ချစ်ပ်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်, ကိုယ်တိုင် Chunk သို့ဖြတ်တောက် ,နှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်လမ်းဘေးအားဖြင့်ခြောက်သွေ့. ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများထက်ပိုများသည် 80 အာဖရိကစျေးကွက်တွင်ထုတ်လုပ်သောလတ်ဆတ်သောပီလောပီနံအမြစ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုဤနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်သားများစွာယူရန်လိုအပ်သည်။ ပီလောပီနံစက်သည်သင်၏မွေးမြူရေးအတွက်အရေးပါသောကိရိယာများဖြစ်သင့်သည်။ ပီလောပီနံကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းခုတ်နိုင်သည်။ ထက်နည်းနှစ်နာရီအတွင်းခန်းခြောက်, ရက်အစား.
ပိုမိုပါးလွှာသောပီလောပီနံအပိုင်းအစများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်။ အစိုဓာတ်နည်းသောအဆင့်များ၌ခြောက်သွေ့စေသည် 13 အစားအစာနှင့်ပီလောပီနံဂျုံမှုန့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ခြောက်သွေ့သောပီလောပီနံပြားများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယူကာဖြတ်စက်သည်သင်၏ပီလောပီနံကိုစျေးကွက်အတွင်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည့်ဂျုံမှုန့်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
Cassava Chipper ၏အင်္ဂါရပ်များ
1.ကျယ်ပြန့် application ကို. အမျိုးမျိုးသောလတ်ဆတ်သောအမြစ်စနစ်ကုန်ကြမ်းများအတွက်သင့်တော်သည်.
3.မြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားနိမ့်စားသုံးမှု, အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာ, အချိန်ကိုချွေတာပါ, မြင့်မားသောစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူး. သင့်လျော်သောစက်မှုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း.
4.လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သောပီလောပီနံစက်,ကုန်ကျစရိတ်နည်းတယ်,ကောင်းသောပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အပိုပစ္စည်း။ ကြာရှည်စွာနှင့်ရှည်လျားသောဘဝကိုပီလောပီနံ chipper စက်ကိုအသုံးပြု.
5.OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်း, အမျိုးမျိုးသော yuca chipper စက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
Cassva Chipping Machine ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) 1000~ 1500
(မီလီမီတာ) 3~ 15